I-Design Enhle Yasekhaya Ingadi Sebenzisa i-PC Greenhouse
Izinsizakalo Zethu 1. Phendula imibuzo yakho ku-inthanethi amahora angama-24 ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka 2. Abasebenzi abanolwazi lokuphendula yonke imibuzo yakho ngokwezifiso zedizayini 1. Sizokwazisa ngobukhulu nemibala oyifunayo. 2. Singakhiqiza amabhodi e-polycarbonate, futhi sizimisele ukukunikeza ezinye iziphakamiso zemininingwane yakho.U: Ngingasithola kanjani isampula? A: Ngokuqondene namasampula wamahhala, udinga nje ukukhokhela ukulethwa kwazo. Q: Yimiphi imigomo yokukhokha ongayamukela? A: Singamukela ukudluliswa kwentambo, i-lett ...
Ikhwalithi Ephezulu Yokushisa Wokushisa Warehouse Ishidi Lepulasitiki lePlastiki
Izici Zemikhiqizo Umbala ohlala isikhathi eside (okungenani iminyaka eyi-10) Umkhiqizo ufaka ukuqina okukhulu emvelweni yemvelo.Ngaphansi kwezimo ezinzima zokuchayeka ku-UV, izinga lokushisa eliphakeme nokubanda okubandayo, kusagcina umbala ozinzile. Ukusebenza okuhle kwe-Anti-corrosion Synthetic Resin Tile kungamelana nokugqwala kwe-longterm acid, i-alkali kanye nosawoti, njll. ..
Ishidi le-FRP eliboshwe nge-Gel luhlobo olusha lomkhiqizo osezingeni eliphakeme we-eco-friendly, owenziwe ngokushisa kwelashwa ijazi ijazi, i-resin yokwenziwa kanye ne-fiberglass. Futhi lisetshenziswa kabanzi kwizimoto ezisezingeni eliphakeme, iziqandisi kanye nokuhlanzwa kweloli, ukwelashwa, inhlanzeko yokudla namanye amaphrojekthi. Sinentengo ehamba phambili phakathi kwabakhiqizi bekhwalithi efanayo nekhwalithi enhle yamanani. Futhi siyathembisa ukugcwaliseka kwensizakalo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa kuzophela ngemuva kokuthi senelisekile. Amandla ukugqwala ukumelana o ...
Izici 1) Okuqukethwe kwe-fiberglass cishe okungu-27% -30%. 2) Ikhono lokumelana nesimo sezulu nokuzihlanza ngokwalo 3) Ukumelana okuphuzi okuhle kakhulu 4) isilinganiso esinamandla, esimelana nomthelela futhi esiphansi sokugoba 5) ukumelana namazinga okushisa aqine ka -38 degrees +110 degrees isikhathi eside 6) Ukumelana nokuguga: F4 ifilimu ecacisiwe engezwe ku ingubo yejel engaphezulu nengabekezeleleki kudala. Ishidi lokufulela le-fiberglass grp frp. Izinto: Ingilazi yefayibha eqiniswe ngopulasitiki, okuqhubekayo okwenza umshini Isicelo Ukuvimbela ukungena kwamanzi ophahleni lwe-FR ...
I-FRP Bonai Corrugated Fiberglass Sheet Factory GRP Oyidingayo
Incazelo Yomkhiqizo Ishidi lokufulela i-fiberglass (i-fiberglass material tile yethayela noma i-FRP skylight ophahleni lukathayela) yinto enhle ehlanganisiwe equkethe ukuqiniswa kwe-fiberglass ku-unsaturated polyester resin matrix kanye ne-U / V eqinise ingubo yokuvikela yangaphandle ngombala ozikhethele wona onokuhluka okuhlukile isilinganiso sesisindo samandla. Ngenxa yalezi zakhiwo ezivelele ngokungafani ne-PVC noma ukhuni, ithola ukusetshenziswa kwayo kabanzi kuyo yonke imikhakha yokuphila: i-aerospace, ujantshi, amakhemikhali ...
Isiteshi esiphakathi nendawo se-U sohlobo lwamanzi okugeleza Nge-plug yokukhipha, ukuphuma ngokuhlangana kwakha uhlelo oluphelele lwamanzi. Iziteshi zokuhambisa amanzi zinemininingwane eminingi, engenza ngokuya ngemfuneko yakho. Isetshenziswa kabanzi ohlelweni lokuhambisa amanzi gound lokwakhiwa kwezokuvikela kuzwelonke, ukwakha umphakathi, ezentengiselwano, izimboni. Isibonelo: isikhumulo sezindiza, itheku, ipaki, inkundla yezemidlalo, izinhlobo eziningi zemizila, ipayipi lesikwele, idreyini yasemgwaqweni njalonjalo. Okuqukethwe ikhava yethu yokuhambisa amanzi yi-grp frp Solicitud 1. Decoración ...